Kaalin shidaal oo Kismaayo laga furay | Faafan News
Kaalin shidaal oo Kismaayo laga furay
Waxaa maanta magaalada Kismaayo laga furay kaalin shidaal oo cusub, waana kaalintii ugu horaysay ee 25 kii sano ee la soo dhaafay laga furo magaalada Kismaayo.
Munaasibadii furitaanka ee kaalinta shidaalka oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro ay kamid yihin wasiirka macdanta, biyaha iyo tamarta Jubbaland Maxamed Yuusuf Cumar, wasiirka waxbarashada Maxamed Ibraahim Maxamuud, Xildhibaano masuulinta rugta ganacsiga Salaadiin, waxgarad iyo qurbajoog.
Kadib markii xariga laga jaray kaalinta shidaalka ayaa waxaa hotelka Agan ee magaalada Kismaayo lagu qabtay munaasabad weyn oo loogu talo galay furitaanka kaalinta.
Masuuliyiin ay kamid yihiin wasiirada macdanta iyo tamarta Jubbaland Maxamed Sheekh Yuusuf, waxbarashada Maxamed Ibraahim Maxamuud, xildhibaano, masuuliyiin ka socday rugta ganacsiga Jubbaland ee JCCI, salaadiin iyo marti sharaf kale ayaa khudbado ka jeediyey munaasabaddii soo furitaanka ahayd.
Xarunta oo lagu magacaabo Kismaayo Petrolioum ayaa ah kaalin shidaal oo si casri ah loo dhisay, waxayna badan ka tari doonta baahidii loo qabay shidaal nadiif ah, waana markii ugu horeysay oo magalada Kismaayo laga hirgaliyo goob shidaal oo sidan oo kala ah, intii ay jirtay Dowladda Jubbaland.
Masuulinta Kismaayo Petrolioum ayaa sheegay in shidaalka ay iibin donaan uu noqon doono mid tayo leh, qiimaha la iibin doonana uu yahay mid aad oo uga jaban shidaalada kale ee lagu iibiyo magaalada .
Xarunta cusub ee kismaayompetrolioum waxay ku talaa bartamaha magalada kismaayo gaar ahaan aargada wana meesha u gu mashquulka badan magalada .
Xildhibaan cusmaan bustoolo oo kamid ah xildhibaanada jubbaland wuxu sheegay in baarlamanka jubbaland ay soo sari donaan sharci kusaabsan maalgashiga jubbaland ee dhanka shidaalka.